Wuxuu u maleynayay in cudurka 'coronavirus' uu yahay mushkilad been abuur ah. ' ilaa uu ku dhacey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wuxuu u maleynayay in cudurka ‘coronavirus’ uu yahay mushkilad been abuur ah....
Wuxuu u maleynayay in cudurka ‘coronavirus’ uu yahay mushkilad been abuur ah. ‘ ilaa uu ku dhacey
Nin reer Florida ah oo u maleeyay in coronavirus-ka uu yahay “qalalaase been abuur ah” ayaa maskaxdiisa beddelay ka dib markii isaga iyo afadiisa ay heshiis ku dhacey COVID-19.
Brian Hitchens, oo ah wade darawal ah oo ku nool Jupiter, ayaa beeniyay khatarta coronavirus ee bogagga Facebook bilaha Maarso iyo Abriil.
“Waan maamuusayaa waxa ay dowladeena sheegto in la sameeyo inta uu kujiro cudurkaan laakiin kama baqayo viruskan maxaa yeelay waxaan ogahay in ilaahey uu ka weynaanayo Virus-kan waligiis jiri doono,” ayuu ku soo qoray bogiisa Abriil 2. “Ciise waa Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada. “
Bartamihii Abriil, Hitchens, oo 46 jir ah, ayaa bilaabay diiwaangelinta caafimaadka isaga iyo xaaskiisa barta Facebook.
“Waxaan guriga ku xanuunsanayay wax ka badan hal toddobaad. Aniga iyo xaaskeygaba aniga iyo guriga waan xanuunsanahay,” ayuu ku soo qoray boostada Abriil 18-keedii. “Wax awood ah maheysto oo waxaan doonayaa inaan sameeyo waa hurdo.”
Maalin kadib, Hitchens iyo xaaskiisa, Erin, ayaa la dhigay Xarunta Caafimaadka ee Palm Beach Gardens, ayuu Hitchens ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Hitchens si dhakhso leh ugama jawaabi karo Isniinta. Sanduuqa cod-bixinta ee lambar loogu talagalay isaga ayaa buuxa.
Ugu yaraan 46,442 xaaladood oo ah coronavirus-ka Florida ayaa jira – iyada oo 1,997 ay u dhinteen – sida la soo sheegay subaxnimadii Isniinta, sida laga soo xigtay xogta caafimaadka ee gobolka.
Qoraal dheer oo uu soo saaray May 12, ayuu Hitchens wuxuu ku sheegay inuu mar ka mid ahaa kuwa u maleeyay in coronavirus-ka uu yahay “qalalaase been abuur ah” oo “laga tirtiray saami” oo “aan ahayn mid culus.”
Taasi waxay bedeshay markii uu bilaabay inuu dareemo xanuun Abril oo uu shaqada joojiyay, ayuu qoray.
Hitchens wuxuu sheegay inuu “haysto kaliya quwad ku filan” inuu isaga iyo xaaskiisa ugu kaxeeyo Xarunta Caafimaadka ee Palm Beach Gardens Abril 19, halkaas oo labadoodaba laga baaray cudurka Fiiruska.
“Way isla garteen markiiba annaguna waxaan tagnay ICU,” ayuu qoray. “Waxaan bilaabay inaan dareemo wanaag maalmo gudahood laakiin xaaskeygu way ka xumaatay ilaa meeshii ay ku kalliftay iyada oo ay saaraan hawo-mareenka.”
Hitchens wuxuu sheegay inuusan waligiis la kulmin xanuuno xanuun iyo xanuun laakiin dareemay daciifnimo iyo daal. Wuxuu sheegay inuu sifiican u dareemay 12-kii Maajo, xilligaas oo uu joogay saddex isbitaal, iyo inuu wali hayo COVID-19, cudurka uu keenay coronavirus. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu qabo cudurka sambabaha ee sambabaha.
Previous articleSaynisyahano ku sugan Shiinaha ayaa rumeysan in dawadan cusub ay joojin karto faafitaanka ‘tallaal la’aan’
Next articleWarbixintii ugu danbeysay itoobiya Covid19 iyo 3 qof oo jooga Jigjiga